Good Archives — Trip LEE - OFISIALY SITE
tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara tsara
Makà Jereo ambadiky ny sehatra amin'ny Trip Lee araka izay miresaka momba ny vato misakana, ao ny fanaovana ny rakikira farany “The Good Life.”
Te-hanomboka ny mieritreritra momba ny tantara. Hatramin'ny nanombohan'ny fotoana nisy iombonana lohahevitra sasany izay mihazakazaka amin'ny alalan'ny tantara. Manana tantaram-pitiavana, mahatsikaiky, ary ny loza - na ny fifangaroan'ny rehetra any tantaram-pitiavana iray fantatra amin'ny anarana hoe hatsikana. Fa manerana rehetra ireo karazana sarimihetsika, misy lohahevitra roa izay mampiseho foana ny: tsara sy ny ratsy.
Eritrereto ny toerana tena sarimihetsika. In Braveheart, Scotland sy William Wallace tsara, raha Angletera sy ny mpanjaka Edward dia ratsy. Ao amin'ny Tantara ny Narnia ny ankizy sy ny Aslan tsara, ary ny mpamosavy dia ratsy. Na dia in Disney sarimihetsika, marina izany. In Aladdin, Aladdin sy ny Génie tsara, fa Jafar ratsy. Aza manao toy ny tsy fantatrao ny momba Aladdin.
Foana ve Ianao ny lafiny tsara mba handresy sy ny ankamaroan 'ny fotoana tiany.
Noho izany, rehefa manomboka miresaka momba an'i Jesosy, ary rehefa manomboka miresaka momba an'Andriamanitra ny olona indraindray mieritreritra ao amin 'ny sokajy. Dia mieritreritra ny rehetra izao ho toy ny cosmic ady eo amin'Andriamanitra sy ny Devoly. Ary tahaka ny rehetra ny toerana tena tantara, isika niandry ny farany hahita izay mandresy. I Jesosy fotsiny…
"Nandritra ny taona maro, Foana aho manao mozika fa ireo olana izao tontolo izao ny fomba fijery sy hevitra an'i Kristy – fa efa nisy foana ny fetra ny mozika, fa misy ihany be dia afaka mifampiresaka amin'ny hira,"Hoy i Trip. "The…
Ara-dalàna raha mahatsiaro ny andro ny olona ny ho faty. Na iza na iza no namoy olon-tiana misy mahalala fa ianao tsy hanadino ny andro dia nandroso. Izany ny faran'ny fiainana, ary izany mahavaky fo.
Mazava ho azy, amin'ny maha-olombelona, tsy mahatsiaro fotsiny olon-tiana. Rehefa olo-malaza maty zava-dehibe aloha, isika hahatsiaro sy hitomany ny andro dia nalaina avy amintsika ihany koa. Ny firenena dia mahatsiaro ny andro Martin Luther King Jr. dia voatifitra, ary ny andro John F Kennedy novonoina. Fa ireo andro manokana dia tsy antsoina hoe tsara. Ireo no mahatsiravina andro, izay malala lehilahy ireo novonoin'ny mampidi-doza namono.
Na izany aza, roa arivo taona lasa izay i Jesoa avy any Nazareta nisy namono noho ny ratsy toetra mpamono, ary mahatsiaro izany andro izany ho "Tsara” Zoma. Inona no tena tsara mikasika ny andro, raha ny tena niresaka momba ny olona teo amin'ny tantaran'ny olombelona dia kerisetra nokapohina sy novonoina noho ny fahavalony?
Ny zava-misy fa ny olona ratsy fanahy dia tetika hamono ny Zanak'Andriamanitra no mampalahelo ary izany isalasalana fa ny lehibe indrindra natao hatramin'izay fahotana. Fa ny fahafatesany dia tsy toy ny fahafatesana hafa tany alohany, na tato aoriany . Afaka miantso andro izany "Tsara" Zoma noho ny antony maro. Izy roa.
“The Good Life” latsaka Aprily 10. Get “Robot” maimaim-poana Eto
In 2006 eo an-tanako rakikira voalohany, Raha toa izy ireo ihany Fantatro, Te hilaza ny olona momba ny Andriamanitra be voninahitra izay tiako ho fantatr'izy. In 2008, "20/20″ nivoaka aho ary te-handrisika ry namana mba hahita ny Tompo amin'ny tena fahitana. 2 taona maro taty aoriana, "Teo anelanelan'ny roa…